I-Flight Sims ehlukile efana ne-Aircaft ????
Umbuzo I-Flight Sims ehlukile efana ne-Aircaft ????
unyaka 1 4 edlule #1125 by pauand2
Indlela yokufaka i-a / c efanayo ku-Sims ehlukile kukhompyutha efanayo
unyaka 1 4 edlule #1126 by i-bobyor
Yikuphi okufanayo nokuthi iyiphi indiza. Ungakwazi ukufaka okuningi FSX izindiza zibe P3D. Awukwazi ukuloba FSX izindiza zibe X-Plane noma ngokuphambene nalokho.